I-Acer Aspire One D260, i-netbook entsha eneebhutsi ezimbini zeWindows-Android | I-Androidsis
I-Acer iyaqhubeka nokubheja i-boot netbook yesibini kwaye kule meko yenye yeendlela zokusebenza ezikhethiweyo Android kunye nezinye iWindows 7. Basandula ukubhengeza ukumiliselwa kwe-netbook yabo yesibini yezi mpawu, i I-Acer Aspire One D260.
Esi sixhobo siza kuthengiswa ngemibala emine, emnyama, emfusa, epinki kunye namalahle kwaye, ngokutsho komvelisi, ibhetri yayo iya kusinika iiyure eziyi-8 zokuzimela.
El I-Acer Aspire One D260 une Umboniso weAcer CrystalBrite ngokukhanya kwe-LED I-intshi eyi-10,1 isisombululo se-WSVGA kunye nesisombululo seepikseli ezili-1024 × 600 kunye nomgangatho we-16: 9. Ikhibhodi yayo yi-93% yekhibhodi enobungakanani obupheleleyo kwaye ine-touchpad ebanzi.
Su iprosesa yi-Intel Atom N455 / 450 (kuxhomekeke kwimodeli) kwaye iya kuba nenkxaso yohlobo lwenkumbulo DDR3 okanye iDDR2 SDRAM kuxhomekeke kwimodeli, inani liya kwahluka ukusuka kwi-1 Gb ukuya kwi-2Gb. Njengekhadi lemizobo linefayile ye- I-Intel Graphics Media Accelerator 3150 ngeememori ezingama-64 ze-DirectX9 zememori ehambelanayo.
Ukugcinwa kwayo ngaphakathi kuya kunikwa nge-2,5-intshi hard drive kunye ne-160/250 Gb kuxhomekeke kwimodeli. Inayo ikhamera yewebhu kunye ne-Wi-Fi 802.11 b / g / n yokunxibelelana. I-Bluetooth 3.0 + HS kwaye ngokuzikhethela inemodyuli yoqhagamshelo ye-3G. Okokugqibela, inomfundi wekhadi elinamakhadi amaninzi, amazibuko ama-3 e-USB, izibuko le-VGA, izibuko le-Ethernet, iziphumo ezi-3,5 zomsindo.
Inguqulelo ye Inkqubo ye-Android ifakiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-Acer Aspire One D260, i-netbook entsha ene-boot ezimbini zeWindows-Android
Ndine-Acer Aspire One D255-N55DQkk (endiyisebenzisa ngoku) kangangeentsuku ezimbini.
I-NetBook ibonakala imnandi kum ukusukela ngokuya kubona abathengi kubonakala ngathi ikhethekile, ibalulekile kwaye igqibelele, kodwa kwimeko yam emva kweentsuku ezi-2 nayo, kuya kufuneka ndiyitshintshe, kuba nje ukuba ndiqale, xa ndiyiqala ndinayo ndinikwe ii-screenshots ezimbini kwaye imini yonke izolo ibindisilela, ukuqala kwakhona kunye nokungasebenzi kakuhle.
Xa bebiza iNkundla yesiNgesi (iValencia) abakhange baphikise ukundinika enye, kuba ziintsuku ezimbini kuphela, ndiza kuya ndiyitshintshe kodwa ngokufanayo, ngaphandle komzuzwana.
Kusafuneka ndifunde ukubeka iifayile ze-Android kuyo kuba andinayo iMarike ye-Android okanye nantoni na enjalo kwinxalenye ye-Android enePC.
Ngokombono wam othobekileyo kufuneka nditsho ukuba ndithakathiwe kwaye ndonwabile kakhulu.
Ndiza kukuxelela ukuba ihambe njani nale NetBook intle, nangona ngelishwa ndinayo le ngxaki incinci.
Ndisandula ukufumana i-ACER Aspire One d260 kwaye bandixelela ukuba ine-bluetooch, kodwa ukuza kuthi ga ngoku andikhange ndikwazi ukuwufumana phi kwaye usebenze njani lo msebenzi.
betha iqhosha leBluetooth
Molo ekuseni, ndiyisebenzisa njani ibluetooth ye-Acer aspire one d260, kwaye kutheni i-web web cam ingandifaki, i-latop ine-windwos 7 starte, kwaye ndingathanda ukwazi ukuba iyahambelana na okanye hayi kwaye ndenza ntoni Ndenza ukusombulula loo mbulelo ndiyathemba ukuba impendulo yakho kungekudala